06/02/13 ~ Myanmar Forward
အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်နေစဉ် တွေ့ရှိသူ ယောက်ခမအား သတ်ခဲ့သူချွေးမ ဖမ်းမိ
Posted by drmyochit Sunday, June 02, 2013, under မှုခင်း | No comments
၂၈-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၇၀၀ အချိန် သုံးခွမြို့နယ်၊ သာသာမြိုင်ကျေး ရွာနေ ကိုသန့်ဇင်ဝင်း၏ နေအိမ်
မြောက် ဘက် ရှိ ရေကန်အတွင်းမှ လွန်ခဲ့သော (၂)ရက် ကျော် ခန့် ကတည်းကပျောက်ဆုံးနေသော ကိုသန့် ဇင်ဝင်း ၏ဖ ခင် ဦးလှတင်၏အလောင်းအား နောက်ပြန်ကြိုး တုပ် လျက် တွေ့ ရှိသဖြင့် ကိုသန့်ဇင်ဝင်းမှ အရေး ယူပေး ပါရန် တိုင် တန်းခဲ့၍ သုံးခွမြို့မရဲစခန်းမှအမှုဖွင့်ပြီး တရား ခံဖော် ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်း ဆောင် ရွက် ခဲ့ပါ သည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မှုခင်းအကူဌာနစုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ခရိုင်/မြို့နယ်များမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ၂၅-၅-၂၀၁၃ရက်နေ့ ၁၆၀၀ အချိန်ခန့် တွင်သေဆုံးသူ ဦးလှတင်၏ချွေးမ မစန်းစန်းလှိုင်(ကိုသန့်ဇင်ဝင်း၏ဇနီး)သည် နေအိမ် တွင် နောက်ကျော ဘက်နေ အိမ်မှ ကရင်ကြီး (ခ) ကိုသက် (ခ)တင်မောင်မြင့်နှင့် လူမှုရေး ဖောက်ပြန် ဆက်ဆံနေ စဉ် ဦးလှ တင် ရောက်ရှိမြင်တွေ့ သွားသဖြင့် ကရင်ကြီးမှာ ထွက်ပြေး သွား ခဲ့ပါသည်။
၁၈၀၀ အချိန် ဦးလှတင်သည် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ကရင်ကြီး ရောက်ရှိလာကာ မစန်းစန်းလှိုင်နှင့်အတူ ဦးလှ တင်အား လည်ပင်း ညှစ်သတ်ပြီး ကြိုးတုပ်၍ရေကန်အတွင်းသို့ပစ်ချခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက် သဖြင့် ကရင်ကြီးနှင့် မစန်းစန်းလှိုင်တို့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၅၀၀၀ တန်အတု တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရန်မရှိဟု ကေအိုင်အိုဆို
မြစ်ကြီးနား၊ ဇွန် ၁
မြစ်ကြီးနားတွင် ဖမ်းမိခဲ့သော ၅၀၀၀ တန် အတုအမှုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်သည့် ကေအိုင်အိုမှ အရာရှိနှစ် ဦး ကို အစိုးရထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ကေအိုင်အေ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“ကေအိုင်အိုမှာ ကိုယ်ပိုင် တရားစီရင်ရေးရှိလို့ လွဲပြောင်းပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က ဆိုသည်။
တရားခံကို လွဲပြောင်းပေးရန် အစီအစဉ် မရှိသော်လည်း အစိုးရထံမှ လာရောက် စစ်ဆေးရန် တောင်းဆို ပါက ခွင့်ပြု သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က ထပ်ဆင့် ပြောကြားသည်။
ကေအိုင်အို နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးနှင့် ကေအိုင်အိုမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိ တစ်ဦး တို့က အဆိုပါ ၅၀၀၀ တန်အမှုတွင် ပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တွင် ဖမ်းဆီး ထားကာ ကျန်တစ်ဦးကို ကေအိုင်အိုတွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး လျက်ရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်၏ ပြောပြ ချ က်အရ သိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ရှင်းရှန်းဟိုတယ်တွင် ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်က ကျပ် ၅၀၀၀ တန်အတု ကျပ်သိန်း ၂၇၀ ကျော်နှင့် တရားခံ သုံးဦးကို ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအမှုတွင် အဆိုပါ ကေအိုင်အို အရာရှိနှစ်ဦးပါဝင် ပတ်သက် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၅၀၀၀ ကျပ်တန် အတုများကို ဧပြီလ တစ်လတည်းတွင် မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး၊ မြဝတီ၊ မှော်ဘီ၊ အင်းစိန် စသည့် မြို့ တို့တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံရှေ့ ရခိုင်ဝန်ကြီး သွားစောင့်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခြံရှေ့တွင် ရခိုင်လူငယ်များက ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် မည့် သတင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင် သည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ခြံရှေ့၌ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ က သွားရောက် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူများက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့တို့တွင် ဘင်္ဂါလီမိသားစု တစ်စုလျှင် ကလေးနှစ်ဦး သာမွေးဖွား ရန် ကန့်သတ်ချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယ ခုလို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုး ထားရှိခြင်းသည် မသင့်လျော်ကြောင်း၊ ယင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လည်း ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းပြောကြားချက်အပေါ် မကျေနပ်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်လူငယ်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံရှေ့ တွင် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မည်ဟု ကောလာဟလသတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဦးဇော်အေးမောင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံရှေ့တွင် မီဒီယာသမား များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် “ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ရခိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘုန်းကြီးပဲလာလာ၊ ရခိုင် လူငယ်ပဲလာလာ ပြန်လွှတ်ဖို့ လာစောင့်နေတာ။ ဒါက သူ့ အမြင်ကိုယ့် အမြင် ပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောဆိုမှုအပေါ် ရခိုင်လူငယ်များက မကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း၊ လုံးဝ ကန့် ကွက်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချင်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီများ အဆိုပါ မွေးဖွားနှုန်းတိုင်း မွေးဖွားပါက ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကြာလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ဘင်္ဂါလီပြည်နယ် ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ခြံရှေ့ ရောက်ရှိနေသော ရခိုင်လူငယ် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုစစ်ငြိမ်းကဆိုသည်။
“မြေမြို၍ လူမျိုးမပျောက် လူမျို၍ လူမျိုးပျောက်” ဆိုသည့်စကား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိစေချင်သည်
Posted by drmyochit Sunday, June 02, 2013, under ဆောင်းပါး | 1 comment
ဒကာမကြီး အောင်ဆန်းစုကြည်- ဦးပဉ္ဖင်းကတော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမို့ ..ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒကာမကြီးရဲ့ လုပ် ရပ်တွေ ကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ထောက်ခံလာတဲ့သူမို့ ဒကာမကြီးအတွက် အကျိုးရှိစေဖို့ ပြောဆို သွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ ယခုတလော ဒကာမကြီးအပေါ်လူကြိုက်နည်းလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်ကစပြောရ မလဲ ဆိုရင် ဘုန်းကြီးဝီရသူပြောတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကနေ မွတ်ဒေါင်း ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲ အခြေခံ ပါ့မယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ ၇၈၆ တွေကို နေရာပေး လိုက်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ လောက မှာလဲ လှုပ် လှုပ်ရွရွ တော်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘုန်းကြီးဝီရသူကထောက်ပြလိုက်တော့ ပိုဆိုး သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်း တို့ကတော့ ဒကာ မကြီး ကို ထောက်ခံ ဆဲပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်သမီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ် မှာက နေရာတော်တော် များများမှာ မွတ်ဆလင်တွေရှိနေပါ တယ်။ အများဆုံးကတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောပေါ့၊ အဲဒီမှာက ကုလား ၉၄ ယောက်ဆိုရင် ရခိုင် ၆ ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ လူများစုက ကုလား တွေ(ဘဂါင်္ လီတွေ)ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်း ဟာ အလွန်တရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အနေ အထား ပါ။ ကဲ.. ဒကာမကြီးလဲသိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုရင် သူ့အကျယ်အ၀န်းက ရှမ်းပြည်နယ်လောက် ပဲရှိတယ်။ သူ့လူဦးရေက သန်း(၁၆၀)ကျော်ရှိတယ်။
ဒီလောက်ကျယ်တဲ့ဗမာပြည်မှာတောင် လူဦးရေသန်း(၆၀)ပဲရှိပါတယ်။ ကွာခြားချက်ကိုနှိုင်း ယှဉ်ပြ တာနော်..။ မွတ်ဆလင်တွေ အကြောင်း ဒကာမကြီးက ဦးပဉ္ဖင်းတို့ထက်ပိုသိမှာပါ။ ဦးဇင်းတို့သိတာက ဒကာ မကြီးကို မမှီပါဘူး။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ ယောင်္ကျားတစ်ဦးဟာ တရား ၀င် မိန်းမ(၄)ယောက် ယူလို့ရတယ်။ ကလေးတွေ ကြိုက်သလောက် မွေးကြတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်ဆလင် အိမ်ထောင်တစ်စုမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးယောက်ျား ၁ဦး၊ မိန်းမ ၄ဦး၊ မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ကလေး ၁၀ ယောက်လောက်မွေး တယ်။ မိသားစု တစ်စုကို အနည်းဆုံး ကလေး(၄၀)ယောက်ရှိတယ်။
တစ်ချို့ဆို မိသားစုတစ်စုထဲမှာ လူဦးရေ ၇၀ ကျော်တဲ့ အိမ်တွေရှိတယ်။ တစ်ချို့ ကုလားတွေဆို ကလေးတွေ များလွန်းလို့ ကိုယ့်သား သမီးတောင် ကိုယ် မမှတ်မိ တဲ့သူ ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်က ရခိုင် က အမ်းမြို့လေးမှာ လူဦးရေ ၅၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်။ အခုလို ဘင်္ဂါလီတွေမွေးနှုန်းနဲ့ တစ်မိသားစု ကို လူ (၅၀)၊ မိသားစု (၁၀၀)ဆိုရင် လူ (၅၀၀၀)၊ မိသားစု (၁၀၀)နဲ့တင် မြို့ငယ်လေး တစ်မြို့ လို လူတွေများ လာမယ်။ အဲဒီလိုမိသားစုတွေ ရခိုင်မှာ အများကြီး။မောင်တောတစ်မြို့ထဲပဲ ကြည့်ဦး။ လွန်ခဲ့ တဲ့ (၁၀)နှစ်လောက်က ဘင်္ဂါလီ (၃၀၀၀၀)လောက်ရှိတဲ့မြို့ဟာ အခု ၇၀၀၀၀၀ (ခုနစ်သိန်း) ကျော်နေပြီ။ ကလေး (၂)ယောက်အမိန့် ဆိုတာကလည်း အရင်ကတည်းက ထုတ်ထားတဲ့အမိန့်၊ ဒါတောင် အခု တရား မ၀င်ကလေး (၆၀၀၀၀)ကျော် ရှိတယ်တဲ့။ မွေးချင်သလောက်သာ မွေးခိုင်းလိုက်လို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပဲ။ ဒါက ရခိုင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်မှာပါတဲ့ ဒေါက်တာတွေပြောတဲ့စကား။ သူတို့လဲ မဟုတ်ဘဲ နဲ့တော့ လက်လွတ် စပယ် မပြောပါဘူး။ ဒကာမကြီး- ဒကာမကြီးသာ ကလေး နှစ်ယောက်မွေးတာ၊ ဘင်္ဂါလီ အားလုံး က ရသလောက် မွေးနေကြတာကို ဒကာမကြီး သိမှာပါ။ ဒကာမကြီးသာ အင်္ဂလိပ်ကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂါလီ ကုလားနဲ့ သာရကြည့် ကလေး (၁၀)ယောက် လောက် မွေးရမှာပဲ။ “မြေမြိုလို့ လူမျိုး မပျောက်၊ လူမြိုမှ လူမျိုးပျော က်မယ်” ဆိုတဲ့စကား ဒကာမကြီး ကြားဖူးမှာပါ။
ဒါကြောင့်လဲ ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက မွတ်ဆလင်မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကလေး၂ ယောက်ပဲ ယူဖို့ သတ်မှ တ်တယ်။ ကုလားတစ်ယောက်ကို မိန်းမတစ်ယောက်ပဲယူဖို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဒါဟာမြန်မာ့ ဓလေ့နဲ့ ညီညွတ် သလို ဒေသအခြေအနေအရ လူဦးရေအရ၀ါးမြိုခြင်းကို ကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမိန့် ထုတ်ထား တာကို ဒကာမကြီးအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့မညီတာတို့၊ ကုလားတွေအပေါ် ခွဲခြား မဆက် ဆံသင့်ပါဘူးတို့ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တော့…အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဒကာမကြီး တော်တော်အောက် သွားတယ်။ ဦးဇင်းက ဒကာမကြီးဘက်ကနာလို့ပြောနေတာပါ။
ဒကာမကြီးစဉ်းစားကြည့်လေ…. သူတို့ ကုလားပြည်မှာ တစ်ခြားနိုင်ငံက သူတွေသွားနေလို့ရသလား၊ ဗုဒ္ဓဘာ သာတွေနေ လို့ရသလား။ တစ်ခြားကို မပြောပါဘူး။ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ အစဉ် အဆက် ရှိနေတဲ့ ကျောက်တောင်မှာ ထွင်းထုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာ ဒကာမကြီး အသိပါ ပဲလေ။ ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းလှတဲ့ လူရိုင်းကုလားတွေကို ဒီလောက်အသေးအမွှားစည်းကမ်းလေး ထုတ်တာ ကို ဒကာမကြီးက ဘာလို့ဝင်ပြီး နာနေရတာလဲ။ သူတို့အတွက် နာလို့ပြောတာလို့ပဲ လူတွေနားလည် နေကြ တယ်။ ဦးဇင်းတို့ကတော့ ဒကာမကြီးမှာ အတိတ်က ဘယ်လိုအမည်းစက်တွေပဲရှိရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီး ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ပဲ ရှုမြင်ပြီး ချစ်ခင်လေးစားပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ပြုခဲ့တာ အင်္ဂလိပ်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကို လုပ်ကြံ စေ ခိုင်းခဲ့တာအင်္ဂလိပ်၊ ဒကာမကြီးယူလိုက်တာက အင်္ဂလိပ်။ ဦးဇင်းတို့အခေါ်တော့ ကုလားဖြူပေါ့ ဒကာ မကြီး ရယ်။ ဦးဇင်းကတော့ ရှင်းရှင်းပဲပြောချင်တယ် ဒကာမကြီးရယ်။ ကုလားဖြူ ကိုချစ်ရင်ချစ်ပါ။ ကုလား မဲတွေကိုတော့ မချစ်လိုက်ပါနဲ့ ။
မြန်မာပြည်မှာနေရင်တော့ မြန်မာစည်းကမ်းအတိုင်းသူတို့နေပါစေ။ မိတ္ထီလာ၊ ဥက္ကံ၊ လားရှိုးနဲ့ အခြားနေ ရာတွေ မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေအားလုံးဟာ မွတ်ဆလင် ကုလားတွေကစလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒီလောက်ဆိုးသွမ်းလှတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေ ကို ဒကာမကြီးသွားပြီး မြှောက်မပေးပါနဲ့။ ဒကာမကြီးအပေါ်မှာ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ မုန်းတီး နာကျည်း သွားမှာကို ဦးဇင်း မလိုလားလို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ လိုင်ဇာဌာနချုပ်သို့ အပြန်လမ်းတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ၂၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်က ၀ိုင်းမော်မြို့တွင် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများသည် ရိုးရာဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်၍ "ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ကျန်းမာပါစေ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အမြန်လက်မှတ် ရေးထိုးပါ၊ ဖမ်းဆီး ခံထားရသော တိုင်းရင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ။ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများအား ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခြင်းမှ ရပ်တန့်ပါ၊ အကြောက်တရားကင်းစွာ လယ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ၊ စိုက်ပျိုးမြေများတွင် ထောင်ထားသော မိုင်းများကို ပြန်ဖော်ပေးပါ" စသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ကျန်းမာပါစေ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အမြန်လက်မှတ် ရေးထိုးပါ၊ ဖမ်းဆီး ခံထားရသော တိုင်းရင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ။ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများအား ပေါ်တာဆွဲခြင်း၊ စစ်သား အဖြစ် စုဆောင်းခြင်းမှ ရပ်တန့်ပါ၊ အကြောက်တရားကင်းစွာ လယ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ၊ စိုက်ပျိုးမြေ များ တွင် ထောင်ထားသော မိုင်းများကို ပြန်ဖော်ပေးပါ . . . . .
"၁၉၉၄ ခုနှစ် ဟိုဘက်တုန်းက စစ်သားတွေက ပေါ်တာဆွဲတယ်။ ကေအိုင်အေက အတင်းအဓမ္မ စစ်သား လုပ်ခိုင်းတယ်။ အခွန်ကောက်တယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ စစ်သားတွေက ဒါမျိုးလုပ်တာ မတွေ့ ရဘူး။ ကေအိုင်အေကတော့ အခု အချိန်မှာလည်း အခွန်ကောက်တုန်း စစ်သားစုဆောင်းတုန်း ရှိသေး တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို နှိပ်စက်တဲ့ ဘယ်လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး" ဟု ခတ်ချိုရွာမှ အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ် ဦးစိုင်း တင်လှိုင်က ဆိုသည်။
၎င်းဆန္ဒပြမှုကို တွေ့မြင်သွားသော ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ "အားလုံးညှိနှိုင်းပြီး လုပ်သွား မှာပါ။ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ (အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး) ဒါကို တောင်းဆိုနေတာ ကြာပါပြီ။ အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အို ဆက်ညှိသွားမှာပါ။ ရှမ်းတိုင်းရင်း သားနဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အရင်ကတည်းက အတူနေခဲ့ကြတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား အတူတကွ နေထိုင်ရေးမူ ပေါ်လစီ ရှိပါတယ်။ (နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့) ကချင်နဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ချစ်ကြည်ရေး အမြဲတမ်း တည်တံ့ခိုင်မြဲမှာပါ" ဟု အပြန်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းနေ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများက ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒများကို ဆွေးနွေးခွင့် မရခဲ့သည့်အတွက် ကျေနပ်မှု မရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နာမည်ကျော် တေးရေးဆရာ ကေအေတီ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန်
မြန်မာပြည်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ တေးရေးဆရာ ကေအေတီ (ခ) ဦးကျော်အောင်သစ်ဟာ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ သျှင်ပါဂူဆေးရုံမှာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။